हिटलरको फासिवादी पथमा वाम सरकार : करनसिंह बडाल
बीसौँ शताब्दीको सुरु तथा पहिलो र दोस्रो दशकमा युरोपले पहिलो विश्वयुद्ध भोग्यो । कारण अरू केही थिएन, त्यो पुँजीवादमा आएको महासङ्कटलाई टार्ने वा लुकाउने पुँजीवादी योजना थियो । त्यो पुँजीवादी अर्थशास्त्रको गलत नीतिको उपज थियो । उत्पादन, विनिमय र उपभोग पुँजीवादका मुख्य सर्त हुन् । यहाँ एउटा प्रसङ्ग लिन जरुरी छ ।
जमिनबाट खनिज निकाल्न जर्मनी र फ्रान्सले श्रमिकहरू अफ्रिकाबाट ल्याउने गर्दथे । दोस्रो, विनिमय उपभोगका लागि अर्थात् उत्पादित सामान तिनै अफ्रिकी देशहरूमा निर्यात गरिन्थ्यो । तत्कालीन साम्राज्यवादी फ्रान्स र जर्मनीको बीचमा खानी मजदुर अफ्रिकाबाट आफ्नो देशमा लैजाने तथा अफ्रिकाको औपनिवेशिक भूगोलका विषयमा विवाद भयो र त्यो नै पहिलो विश्वयुद्धको मुख्य कारक तत्व बन्न पुग्यो । पहिलो विश्वयुद्धको अन्त्य जर्मनीका लागि अपमानपूर्ण तरिकाले भयो ।
जर्मनीमा अन्धराष्ट्रवाद पलाइरहेको थियो र त्यसको गर्भमा फासिवादी एडोल्फ हिटलरको विकास भइरहेको थियो भने अर्कातर्फ हिटलरका आदर्श गुरु बेनिटो मुसोलिनीको उदय पनि पहिलो विश्वयुद्धको कारणले युरोपको पुँजी अनुत्पादक क्षेत्रमा केन्द्रित भएको थियो । त्यसको साइड इफेक्टका रूपमा १९३२÷३३ तिर महासङ्कट आयो र जर्मनी तथा इटालीलाई फासिवादतर्फ बढ्न त्यो आर्थिक महासङ्कट उत्प्रेरक बन्यो नै ।
फासिवाद भनेको चरम दक्षिणपन्थी ९ाबच चष्नजत mयखझभलत० आन्दोलनको रूप हो । यो समाजवादको ठीक उल्टो धारा हो । फासिवादले राष्ट्रको प्रभुत्व, आर्थिक रूपमा प्राइभेट ९निजी० सम्पत्तिको पक्षधरता लिने गर्दछ । दार्शनिक रूपमा यसका निम्नआधारहरू हुन् ः
१. आफ्नो राज्य मात्रै सबै थोक हो ।( state is everything.
२. आफ्नो राज्यभन्दा अरू केही होइन । (Nothing outside the state.
३. राज्यको प्रतिद्वन्द्वी कोही छैन । (No rebel of state.
फासिवाद प्रतिद्वन्द्वीसँग शून्य सहनशीलता राख्ने गर्दछ । यसले नेतृत्वलाई अधिभूतवादी तरिकाले बुझ्ने गर्दछ । यसले राष्ट्रलाई माथि पु¥याउने मात्रै सोच्छ तर व्यक्ति–शासकलाई प्रधान मान्ने गर्दछ । शासन अति केन्द्रीकृत÷सर्वसत्तावाद र निरङ्कुश सरकार यसका लक्षण हुन् । त्यस्तै बलियो नेतृत्व, विपक्षीमाथि चरम नियन्त्रण, अति नियन्त्रित समाचार अर्थात् सञ्चारप्रणाली, खुला अर्थनीति तथा समाजवादी अर्थनीतिको विरोध, समाजवादी अर्थप्रणाली शासकको चाहनाअनुसारको र सर्वसत्तावादी नेतृत्वको चरम व्यक्तिवादी गौरव वा विजय फासिवादका मुख्य विशेषता हुन् । अर्को शब्दमा फासिवाद अन्ध राष्ट्रवाद (chauvinism) हो । यसले राष्ट्रमा होइन, व्यक्ति (crucial role of hero) मा विश्वास गर्दछ ।
हिटलरका सञ्चारमन्त्री गोयबल्स र ओली नेतृत्वको सरकारको समाचार प्रसारण गर्ने शैली पनि एउटै देखिएको छ । दोस्रो विश्वयुद्धको बेला जर्मनीका दस लाख सेनामध्ये रुसको लेनिनग्रादको युद्धमा ४ लाख जर्मन सैनिक मारिइसकेका थिए । यसरी रुस विजय भएपछि जर्मनी सेना पश्चिम भाग्दै गरेको बेला गोयबल्सले आफ्नो सरकारी रेडियोबाट जर्मनी सेनालाई पहिलेको युद्धभन्दा केही अप्ठ्यारो परे पनि जर्मनीले रुसमाथि विजय गरेको घोषणा गरेका थिए । यता ओली नेतृत्वको सरकारले पनि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी नेपाल भ्रमणमा आएको बेला त्यस्तै गोयबल्स शैलीमा नेपाली जनता मोदीको अभिनन्दन गर्न आतुर रहेको ९अग्निप्रसाद सापकोटाको भनाइ० हल्ला फिँजाए जब कि नेपाली जनता मोदीलाई सामाजिक सञ्जालमा सत्तोसराप गरिरहेका थिए ।
हिटलरले दोस्रो विश्वयुद्ध चलिरहेको बेला जर्मनी, पोल्यान्डलगायत देशहरूमा यातनाशिविर निर्माण गरेका थिए । ती शिविरमा एकैपटक १० लाखदेखि ३० लाखसम्म यहुदी र अन्य युरोपेली देशका सर्वसाधारण जनतालाई निर्मम यातना दिएर मारिएको थियो । मानिसलाई कोइला भट्टीमा जिउँदै पोलिन्थ्यो । यहुदी बालबालिकालाई हिटलरका सेनाले जिउँदै पर्खालमा फाल्ने गर्दथे । त्यहाँ मानवअधिकार भन्ने नै थिएन । ओली नेतृत्वको सरकारले पनि नेपालमा ठीक त्यस्तै गर्ने लक्षण देखाएको छ ।
ओली प्रधानमन्त्री बनेको दोस्रो दिनदेखि शान्तिपूर्ण कार्यक्रम गरिरहेका विप्लव नेतृत्वको नेकपाका २०० जना युवासहित स्थायी समिति सदस्य हेमन्तप्रकाश ओली र सोही पार्टीका पोलिटब्युरो सदस्य पदम राईलाई सडकमा हुल जम्मा गरेको मुद्दा लगाएर १० दिनसम्म थुनामा राख्यो । त्यस्तै सिन्धुलीमा सोही पार्टीका विद्यार्थी सङ्गठनका केन्द्रीय सदस्यको थुनामै प्रहरीले यातना दिएर हात भाँच्यो । पूर्वसभासद् किरण राईसहित ७ जनालाई बसिरहेको ठाउँबाट बिनाकारण पक्राउ गरेर सार्वजनिक मुद्दा लगाई ४ पटक अदालतपरिसरबाटै गिरफ्तार गरिसकेको छ । देशैभरबाट नेपालका नेता–कार्यकर्तालाई पक्राउ गरी थुनाभित्र निर्मम यातना दिइँदै आएको छ । जनयुद्धकालमा २०५८÷५९ सालतिर सरकारले दिने प्रकृतिको यातना रामबहादुर थापा नेतृत्वको गृह प्रशासनले दिँदै आएको छ । केही दिनअघि सर्वोच्च अदालतले समेत थुनामुक्त गर्नू भनेर दिएको आदेशलाई कुल्चिँदै मजदुर अध्यक्ष अमर झाँक्री तथा नेकपाको युुवा सङ्गठनका अध्यक्ष बाबुराम राईलाई अदालत परिसरबाटै पक्राउ गरेको छ ।
१५ जना पत्रकारलाई समेत स्थानीय निर्वाचनका बेला गैरकानुनी तरिकाले हिरासतमा लिएको थियो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका पोलिट व्युरो सदस्य पदम राई, भरत बम, ओम प्रकाश पुन लगायत ४२ जनालाई काठमाडौंबाट एकै पटक पक्राउ गरियो । त्यस्तै नकपाका केन्द्रीय सदस्य देब नाराण यादबलाई पक्राउ गर्दै छाड्दै गरेको छ । असार २२ गते नेकपाका दोस्रो बरियताका नेता प्रकाण्डसहित तीन जनालाई पक्राउ गरी अहिले हिरासतमा राखिएको छ । प्रकाण्ड पक्राउको बारेमा बोल्दै गृहमन्त्री बादलले प्रकाण्डलाई अपराधि भन्नसम्म भ्याए । त्यस्तै नेकपाका नेता तथा कार्यकर्तालाई देशैभरीबाट गिरफ्तार गर्दै भुट्टा मुद्दा लगाउँने गरेको छ ।
सरकारले नेकपालाई पूर्णरुपमा राजनीतिक सभा, सम्मेलन गर्न बन्देज समेत लगाएको छ । यसरी नेपालभित्र रहेका मानवअधिकारवादीहरूले पनि गैरकानुनी हिरासत तथा थुनाभित्र प्रहरीले दिइरहेको चरम यातनाका विषयमा एक शब्द बोलेका छैनन् । ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि काठमाडौँमा प्रदर्शन गर्न प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरिएको छ । शान्तिपूर्ण रूपमा प्रदर्शन गर्न पाउनु नागरिकको अधिकार हो । काठमाडौँका ६ स्थानबाहेक अरू ठाउँमा प्रदर्शन गर्न नदिने सरकारको तयारीलाई फासिवाद उन्मुख कामका रूपमा बुझिएको छ ।
हिटलर भीषण युद्धको राप र तापबाट स्थापित भएका थिए । पहिलो विश्वयुद्धको बेला हिटलरले मेसेन्जरको काम गरेका थिए । उनका ५ जना सहयात्रीको युद्धमा परी मृत्यु भयो तर हिटलर भने बाँच्न सफल भए । युद्धमा क्लोरिन ग्याँस आँखामा परेर १ वर्षजति अँध्यारो कोठामा बसे उनी । पछि हिटलरले मृत्युको मुखबाट बचेको जीवनलाई राजनीतितर्फ डो¥याउँदा उनलाई आफू अति निपुण भएको आत्मविश्वास जाग्यो । फलस्वरूप हिटलरमा स्वाभाविक रूपमा अति महत्वाकाङ्क्षा देखाप¥यो । अन्तिममा गएर हिटलर कति अन्धभक्त भए भने पूरै विश्व निल्ने दाउमा अगाडि बढेका उनले आफ्नो देश गुमेको समेत थाहा पाएनन् । अन्ततः उनले आत्महत्या गरे । त्यस्तै ओली र प्रचण्डमा पनि अत्यधिक दम्भ बढेको छ । झापा आन्दोलन हुँदै करिब १५ वर्ष जेलजीवन र पार्टीमा अल्पमतबाट अध्यक्ष हुँदै पहिलो प्रधानमन्त्री हुँदा नक्कली राष्ट्रवादीको पहिचान बनाएका ओली १० बर्से जनयुद्धको नेतृत्व गरेको मूल नेतृत्व प्रचण्डलगायतको एउटा समूहलाई एमालेमा विलय गराउन सफल भए । हुँदाहुँदै एमालेको मतदान चिह्न सूर्यमा घोक््रयाएर माओवादीलाई ल्याइसकेपछि ओलीलाई संसार जितेको महसुस भयो । हुँदाहुँदै दुईतिहाइ मतसहितको सरकार बनेपछि त हिटलरले जस्तै विवेक गुमाउन पुगेका छन् ओलीले । अहिले त विवेक गुमाएझैँ नेकपाको राजनीतिक आन्दोलनलाई आतङ्ककारी मात्र होइन, पृथकतावादी आन्दोलनको संज्ञा दिन थालेका छन् । यसरी हिटलरको दम्भ र ओली–प्रचण्डको दम्भ सारमा एउटै देखिन थालेको छ ।
प्रवृत्तिगत रूपमा ओली–प्रचण्ड र हिटलरका बीच यस किसिमका केही समान लक्षणहरू देखापरेका छन् । यसको मतलब ओली–प्रचण्ड पनि फासिवादी नै भइसकेका हुन् त रु अवश्य पनि ओली–प्रचण्ड मात्र फासिवादी होइनन् । उनीहरू सामाजिक फासिवादी बन्ने बाटोमा भने निश्चय नै अग्रसर छन् ।
सामाजिक फासिवाद पनि चरम दक्षिणपन्थ (Far right movement) आन्दोलनको विशेष रूप हो तर यसमा सम्पूर्ण फासिवादका लक्षणहरू देखा पर्दैनन् । यद्यपि यसमा आंशिक लक्षण र प्रवृत्ति भने देखा पर्दछन् । जस्तै सामाजिक फासिवादमा कुनै विशेष राजनीतिक दललाई जनताले समर्थन गर्छन्, प्रतिनिधि बनाएर नीतिगत ठाउँमा पठाउँछन् । जनताको अत्यधिक मत सामाजिक फासिवादी पार्टीहरूले भ्रम फिँजाएर प्राप्त गर्छन् तर जनताले देश, समाज तथा आर्थिक प्रगतिका लागि मत दिन्छन् । यसरी जनमतको विरुद्ध गएर सामाजिक फासिवादीहरू जनतामाथि अन्यायपूर्ण युद्ध थोपर्ने गर्छन् । सामाजिक फासिवादका बारेमा स्टालिन भन्नुहुन्छ, ‘फासिवाद र सामाजिक फासिवाद जुम्ल्याहा दाजुभाइ हुन् ।’
सन् १९२८ मा छैटौँ अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट ९कोमिन्टर्न० अन्तरदेशीय प्रजातन्त्र ९क्ष्लतभचलबतष्यल म्झयअचबअथ० फासिवादको अभिन्न अङ्ग भएको ग्रिगोरी जिनोभ (inter nation democracy) ले तर्क गरेपछि जोसेफ स्टालिनले त्यसको समर्थन गरे भने उता लियोन ट्राट्स्कीले त्यसको कडा प्रतिवाद गरे । जब जर्मनीमा नाजी पार्टीले कम्युनिस्ट पार्टी तथा यहुदीहरूमाथि भीषण दमन ग¥यो त्यसपछि सामाजिक फासिवाद पनि फासिवादकै अभिन्न अङ्ग भएको संसारभरिका कम्युनिस्टहरूले स्वीकार गरे ।
Posted on August 13, 2018 Author Categories Uncategorized, खेलकुद, फोटो स्लाइडर, बिचार/विश्लेषण, मुख्य समाचार, राष्ट्रिय, राष्ट्रिय Group, स्थानीय
Previous Previous post: मन्त्रालयभित्रै कर्मचारी नेताले उपसचिव कुटे
Next Next post: दुई बिद्यार्थी नेता पृथ्वीनारायण क्याम्पस परिसरभित्रै घेराबन्दीमा